Lena ikhasi lesibonelo. Kuyinto sihluke a post blog ngoba kuzohlala endaweni eyodwa futhi kuzobonakala kusayithi lakho navigation (e izindikimba kakhulu). Abantu abaningi baqala nekhasi Mayelana ukuthi wethula ukuba ezingaba kubavakashi. Kungase yisho okuthile okunjengokuthi:
Sawubona lapho! Ngingumfana isithunywa ibhayisikili emini, umlingisi Ezifuna ebusuku, futhi lokhu website yami. Ngihlala e-Los Angeles, abe inja enkulu okuthiwa Jack, futhi Ngithanda Pina coladas. (futhi Gettin’ sabanjwa imvula.)